Chrome 74 ikozvino yavapo: nzira yakasviba muWindows 10 uye hukuru hukuru | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi raive zuva rakanyorwa pakarenda uye nguva inoita kunge isiri kuda kusvika. Google yaifanirwa kuvhura Chrome 74 nhasi, iyo nyowani vhezheni yedesktop yako browser iyo ichauya nenhau dzinonakidza. Sezvo, zvinosuruvarisa, zvakajairika, pachave nenhau kuti panguva yekumisikidzwa kwayo inongosvika chete kune inoshanda system. Chero zvazvingaitika, vashandisi veLinux vanofanirwa kunzwisisa kuti munyika ino mune zvakawanda zvakasiyana graphical nharaunda, saka kuvhura mamwe mabasa kune wese munhu harisi basa riri nyore
Basa ratiri kutaura nezvazvo rakatosvika pa macOS mune yapfuura vhezheni, uye haisi imwe kunze kweiyo maitiro erima. Ini pachangu, ini handizive zvayakandipa, asi izvozvi ndinofunga kuti zvese zvakasviba zvinopa mufananidzo unoyevedza kupfuura iwo mwenje wandanga ndichishandisa hupenyu hwangu hwese pane chero anoshanda system. Kana iri mamwe masystem anoshanda, Google ichawedzerawo maficha, chimwe chinhu chaitarisirwa.
1 Chrome 74 ichaita kuti usanyanya kuita dzungu
2 Chrome ichavhara incognito mode kuona
Chrome 74 ichaita kuti usanyanya kuita dzungu
Iyo yakasviba modhi yatiri kutaura nezvayo haisi nyaya. Ndezve hurongwa huchaona kuti ndeupi dingindira ratiri kushandisa paWindows (uye macOS kubvira vhezheni yekupedzisira) uye inozoichinja otomatiki kuti isapesane neese desktop. Windows 10 ine iyi sarudzo, yakati wandei yakavanzwa, inofanira kutaurwa, asi haisati yasvika pamakona ayo ese, seEdge browser.
Kune rimwe divi, Chrome 74 ichasanganisirawo sarudzo kune kuderedzwa kwekufamba. Uye ndezvekuti kune vanhu vanokwanisa kuita dzungu nekufamba kwakanyanyisa uko kuri mumapeji akasiyana ewebhu. Kune vanhu ava, iyo nyowani vhezheni yeChannel ichawedzera sarudzo (yakaremara nekutadza) iyo inoderedza kufamba mune zvinokonzeresa zvakadai separallax, kuburitsa kana kutsvedza zvirimo.
Chrome ichavhara incognito mode kuona
Chrome 74 inosanganisira sarudzo iyo zvinodzivirira mapeji ewebhu kubva pakuziva kuti tiri kushandisa incognito modhi. Kusvika ikozvino, chinhu chinonakidza ndechekuti kushandisa iyi modhi kwakabvumidza mawebhusaiti kuteedzera izvo zvatakashanyira nenzira iyi, izvo zvakavatendera kuti vagadzire kana kuwedzera chimiro pakushandisa kwedu webhu. Iyo itsva vhezheni yeChrist ichabvisa izvo mukana.
Chrome 74 inofanira kunge yave kuwanikwa kune ese masisitimu akatsigirwa, asi na22: 30 kuSpain iyo yekuvandudza haisati yaonekwa. Isu tinorangarira kuti, kana tichiisa Chrome paLinux pane masisitimu akaita seUbuntu, inongowedzera yayo repository, iyo ichatibvumidza kuti tivandudze pakutanga pane dai yaive mumahofisi ehurumende. Vashandisi veWindows uye macOS vachakwanisa kusimudzira kubva Google Chrome Zvirongwa / Rubatsiro / Ruzivo. Kana iwe usati waiswa izvozvi, inowanikwa kubva pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Chrome 74 iri munzira, ine yakasviba modhi mukati Windows 10 uye kugadzirisa zvakavanzika